Iyo yakanakisa yakavhurwa sosi CSS masisitimu e2020 | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yakanakisa yakavhurwa sosi CSS masisitimu
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, Zvirongwa, Free Software
Kunyangwe mazhinji mawebhusaiti anomhanya pasi pemaneja wezvemukati, pane zvakawanda zvinofanirwa kutaurwa mukuda kwekugadzira portal kubva pakutanga. Uye, zvakadaro, mamaneja emukati anodawo mumwe munhu kuti atarisire iwo ekuonekwa kwavo. Mune ino post isu tichaenda pamusoro pemamwe akanakisa maturusi ekugadzira CSS mafashoni.
1 Ngatitangei pakutanga. Chii chinonzi CSS?
2 Chii chinonzi CSS chimiro?
3 Iyo yakanakisa yakavhurwa sosi CSS masisitimu
3.4 Semantic UI
Ngatitangei pakutanga. Chii chinonzi CSS?
Ko imba yemaroto ako ingave yakaita sei? Inogona here kuva neimwe kana maviri pasi? Ungada here dzimba dzekurara pazasi uye kicheni kumusoro? Wadii kuisa mubhavhu mubhedhuru?
Uye kana izvo zvagadziriswa, ndeupi muvara waungapenda iwo makamuri? Ungaita kumberi kwedombo here?
Tinogona kuita fananidzo pakati pewebhusaiti neimba. Kune rimwe divi tinaro chimiro chesaiti uye pane chimwe chinoonekwa. Muchiitiko icho chimiro chakatemwa nehurongwa uye chinoonekwa nekutarisa ekushongedza sampuli.
CSS ndicho chirevo cheCascading Style Sheets.. Ipo HTML ichishandiswa kuronga gwaro rewebhu (kutsanangura zvinhu zvakaita semapeji, misoro uye kuratidza nguva yekuisa mifananidzo, vhidhiyo nezvimwe zvemidhiya) CSS inoisa maratidziro emapeji
Iine CSS unogona kutsanangura manyorerwo echinhu chimwe nechimwe cheHTML. Elements ndiwo ega HTML zvikamu zvewebhu peji.
Style machira vanogona kuve vekunze, vemukati kana online. Kana iwe uchida kuishandisa kunze, iwe unofanirwa kusevha se .css mafaera uye udza iyo .html faira kwaungavawana.
Mune yemukati modhi, mirairo yakanyorwa mumusoro weimwe yakatarwa
Iine online mode, iyo yekunze masitayiti inogarwa pane rakasiyana server. Ivo anonyanya kukodzera kana tichida kuishandisa kakawanda.
Chii chinonzi CSS chimiro?
CSS masisitimu izvo zvishandiso zvinoshandiswa nevashandisi vemashandisi ekushandisa kuti vaite basa ravo nekukurumidza. Panzvimbo pekugadzira mhinduro kubva pakutanga nguva dzese panouya chirongwa chitsva, lmasystem anopa vanogadzira maturusi ekukurumidza kugadzira nzvimbo dzemushandisi dzinogona kugadziriswa uye kuitwazve sezvazvinodiwa.
Mune mashoma mazwi, tinogona kutsanangura masisitimu se muunganidzwa weCSS maitiro machira akagadzirirwa uye akagadzirira kushandisa mumhando dzakasiyana dzemamiriro ezvinhu.
Kuchengetedza nguva handiyo chete bhenefiti iyo inouya nekushandisa CSS zvimiro. Nekuvashandisa, iwo magadzirirwo akaenzana uye ivo vanotendera mushambadzi kuti averenge nyore nyore imwe kodhi yekuvandudza.
Maererano pachavoBootstrap ndiyo inonyanya kufarirwa yehurongwa hweHTML, CSS, uye JS. Izvo zvakanaka zvekugadzira nhare-inoshamwaridzika (Nhare yekutanga) uye inoteerera masaiti.
Zvinotaridza kuti vanhu vanoita masystem havana mbuya.
hwaro Zvinotsanangurwa se "Nyika Yepamberi Yakagadziriswa Adaptive Sisitimu"
Icho chishandiso chinobatsira kugadzira mawebhusaiti uye webhu kunyorera nekusimbiswa pane zvido zvebhizimisi. Facebook, eBay, Mozilla, Adobe, HP, Cisco, uye Disney ndevamwe vevashandisi vayo.
wana ndeye yemahara uye yakavhurwa sosi CSS chimiro yakavakirwa paFlexbox uye inoshandiswa nevanopfuura mazana maviri ezviuru vanogadzira.
Flexbox yakagadzirirwa kubatsira kugovera iyo nzvimbo pakati pezvinhu mune interface uye nekuvandudza kuenderana kugona. Flexbox inobata dhizaini mune imwechete chete panguva - kungave seyera kana sekoramu. Izvi zvinopesana nemhando mbiri dzeCSS Grid Layout modhi, iyo inobata makoramu uye mitsara panguva imwe chete.
Semantic UI chimiro chekuvandudza icho inobatsira kugadzira maratidziro akanaka uye anodavirira uchishandisa HTML-inoshamwaridzika nevanhu.
Iyi sisitimu inovimbisa kutibvumidza isu kuvaka akanaka mapurani ane ayo anopfuura zviuru zvitatu zvinyorwa uye anopfuura makumi mashanu emushandisi interface zvikamu.
Iyo zvakare inosangana nemaraibhurari mazhinji echitatu-bato, kusanganisira React, Angular, Meteor, kana Ember.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iyo yakanakisa yakavhurwa sosi CSS masisitimu
AHIEZER JULCA BLAS akadaro
Pindura kuna AHIEZER JULCA BLAS
Ini ndinoteedzera kune inotevera
Martin Miguel akadaro
Chinyorwa chakaipisisa chandakaverenga pane linuxadictos
Pindura Martin Miguel
Covid-19: gadzira uye ubudise kodhi yemuchina wekufema unobva paRaspberry Pi